नेपाल चलचित्र निर्माता संघको भेलामा जे जे देखीयो.......! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > नेपाल चलचित्र निर्माता संघको भेलामा जे जे देखीयो.......!
नेपाल चलचित्र निर्माता संघको भेलामा जे जे देखीयो.......!
April 21, 2018 Nepali
नेपाल चलचित्र निर्माता संघले आज राजधानीमा एक भेला कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । भेला गर्नुको मुख्य उद्देश्य थियो बक्स अफिस सिस्टम तत्काल नेपालका सम्पुर्ण सिनेमा हलमा जडान गर्नु पर्ने र चलचित्र प्रर्दशन पश्चात उक्त चलचित्रले कमाएको रकम बाँडफाँडको असमानता तोड्नु पर्ने । यि सँगै अन्य विषयहरु पनि रहेका छन् ।
जस्तै हाल कुनै पनि सिनेमा हलमा बजाएको ट्रेलर,उक्त हलमा पोस्टर टाँस्ने स्थान,फिल्म ईनकोडीङ्ग चार्ज,पर शो चार्ज लगायतका बिभिन्न शिर्षकमा सिनेमा हलले निर्माताहरु सँग पैसा असुल्दै आएको छ । यस विषयमा पनि आज निर्माताहरुले छलफल गरेका छन् ।
कुनै पनि हलमा फिल्म चल्नु भनेको निर्माताको मात्रै नभएर त्यो हलको पनि ब्यापार भएकाले माथी उल्लेखीत शिर्षकहरुमा निर्माता सँग पैसा असुल्नु सरासर हलमालीकको दादागिरी भएको निर्माताहरुको भनाई रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली सिनेबृतमा निकै चर्चामा रहेको विषय हो बक्स अफिस । बुझिए अनुसार नेपाल सरकारले सबै सिनेमा हलमा अनिवार्य बक्स अफिस सिस्टम जडान गर्नै पर्ने कानुन बनाएको छ । तर हल ब्यावसायीहरु बक्स अफिस सिस्टम जडान नगरेर खुल्लम खुल्ला राज्यले निर्माण गरेको कानुनको धज्जी उडाईरहेका छन् ।
यसरी हलब्यावसायीले बक्स अफिस जडान गर्न आलटाल गर्नुको मुख्य कारण सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजस्व नै भएको बुझिएको छ । यदि बक्स अफिस जडान गर्ने हो भने कुन चलचित्रबाट कुन हलले कति ब्यापार गरेको छ भन्ने हिसाब प्रष्ट हुन्छ र सोही बमोजीम उसले राज्यलाई राजस्व तिर्नु पर्छ । यसो भएका राजस्व छल्न पाईदैन । राजस्व छल्नकै लागी हलहरुले बक्स अफिस सिस्टम जडान गर्न ढिला सुस्ती गरेको आरोप निर्माताहरुले लगायका छन् ।
हाल सम्म कुन चलचित्रबाट कुन हलले कति ब्यापार गरेको छ भनेर ढुक्क साथ भन्न सक्ने कुनै आधार छैन । यती सम्म कि आफ्नो चलचित्र कुन कुन हलमा चलेको छ, भन्न सक्ने समेत अवस्थामा निर्माताहरु छैनन् । हल मालिक र बितरकहरुले जे लेखेर दिए, त्यसैमा चित्त बुझाउनु पर्ने निर्माताहरुको बाध्यात्मककारी अवस्था रहेको छ ।
यता नेपाली चलचित्र निर्माण गर्ने निर्माताहरुको घर जग्गा लिलाम भैरहँदा उता हल ब्यावसायीहरु एक पछि अर्को हल थप्दै गैरहेको पनि हामीले सुनिरहेका छौं ।
हुन त यो विषयमा निर्माता संघले बिगतमा पनि बिभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु नगरेको पनि होईन । तर यस पटकको आन्दोलन निर्णायक हुने निर्माता संघका महासचिब रोज राणाले दाबी गरेका छन् । उनको दाबी कती सम्म सत्य हुन्छ त्यो पनि समयले चाँडै देखाउने छ ।
आजको भेलाले आगामी जेष्ठ २ गते सम्म माथी उल्लेखीत विषयमा छलफल गर्नको लागी हल ब्यावसायीहरुको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघलाई समय दिएको छ । यदि उक्त समय सम्ममा आफ्ना मागहरु प्रति चलचित्र संघ गम्भीर नदेखीए आफुहरु आन्दोलनमा उत्रने निर्माताहरुले बताएका छन् ।
नेपाल चलचित्र निर्माता संघ प्रति असन्तुष्ठी जनाउँदै अर्को संघ खोलेको बताउने नवल खड्का पनि यो भेलामा उपस्थित भएका थिए । उनलाई निर्माता संघले स्टेजमा गएर भाषण गर्ने मौका पनि दियो । स्टेजमा पुगेर खड्काले माथी उल्लेखीत मुद्धामा आफ्नो पनि सर्मथन रहेको र यो मुद्धाबाट निर्माता संघले डगमग नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेमा आफु पुनः यही संघमा आउने पनि उद्घोष गरेका छन् ।
नवल खड्का पदको लोभी भएकाले उनको भनाईमा बिस्वास गरीहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उपस्थित एक निर्माताले बताएका छन् ।
उक्त भेलामा देखीएको रमाईलो दृश्य त के थियो भने, सबै निर्माताहरुले चलचित्र प्रर्दशन गर्दा गरीने ईन्कोडीङ्ग चार्ज नतीर्ने बताईरहेका बेला निर्माता संघकै अध्यक्ष आकास अधिकारी भने आफुले भित्रायको सरोभर र आफ्नो स्टुडीयोको प्रचार प्रसार गर्न मै ब्यस्त रहेका थिए । उनले चलचित्र ईनकोड गर्दा अर्को सरोभरले यती पैसा लिने गरेकोमा आफुले यती कममा गरीदिने र त्यहाँबाट उठेको रकमबाट निर्माता संघलाई यती सहयोग गर्ने भनेर केही नयाँ स्कीमहरु दिईरहेका थिए ।